မြန်အောင်သား: January 2014
Y325-T00 MM Font & System Font Restore
အရင်ဆုံး ကိုရဲလင်းအောင်ကို credit ပေးပါတယ်။
လိုချင်တဲ့ အချိန် ပြန်ရှာနေရင် လွယ်ကူအောင် မျှဝေပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Saturday, January 25, 2014 No comments: Links to this post
HTC ONE 4.3 ROOT မလိုတဲ့ မြန်မာစာ
HTC ONE 4.3 အတွက် CWM က နေ FLASH က မယ့် FONT ZIP ဖိုင်လေးပါ ခင်ဗျာ... ကျနော် အသုံးမကျစွာနဲ့ တစ်မနက်လုံးစမ်းဘုရားတပီး စမ်းခဲ့ရတာပါ... လိုချင်တဲ့သူတွေအောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်ကြနော်
(ဘာပဲလုပ်လုပ် BACKUP လေးကိုတော့ သတိရကြပါခင်ဗျာ)
ရေးသားသူ- ဘီလူး ဂဒုံး at Tuesday, January 21, 2014 No comments: Links to this post
China Tablet တွေ recovery မပါလို့စိတ်ညစ်နေလား ????
recovery မပါတဲ့ tablet တွေ lock ဖြည်ကြမယ်
Recovery မပါသော China Tablet များ recovery မပါလို့ android ဆိုတဲ့ နေရာက နေမသွားတော့ပဲ Loop ပတ်နေတာတွေ.... Passcode,Pattern lock,Password မေ့သွားတာတွေ Gmail တောင်းနေတာတွေကို ဖြုတ်ပစ်ပေးနိုင်တဲ့ tools လေးပါ .... service သမားတွေ မရှိမဖြစ်ကိုဆောင်ထားသင့်တယ်ထင်တာပဲဗျာ... ကျွန်တော်ကတော့ တော်တော်လေးကို သဘောကျပါတယ်... A10 လား A13 လား ကြိုက်တဲ့ Chipset လာခဲ့ ပါလို့ ခေါ်လို့ရတယ်ဗျ... ဒီ tool လေးက စမ်းကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်အောက်ကပုံလေးကိုနှိပ်ပီးတော့ဒေါင်းနော်.....
Touch Point လေးပြောင်းပီ လန်းမယ်.....
Touch Point ပြောင်းနည်း
touch point လို့ခေါ်တဲ့ကောင်လေးလေ အာ့ကောင်ကို ခုလို ကိုလိုချင်တဲ့ပုံပြောင်းပစ်လို့ရတယ်..
အရင် ကျနော် တင်ပေးဖူးတဲ့ setting BG ပြောင်းတဲ့ နည်းတုန်းကလိုပဲ..
setting background image ထည့်တဲ့နည်း..
နှစ်ခုလုံးကို အောက်မှာ zip ချုပ်ပေးထားပါတယ်
ရေးသားသူ- ဘီလူး ဂဒုံး at Tuesday, January 21, 2014 1 comment: Links to this post
4.0 နဲ့ အထက်တွေကို root မလိုပဲနဲ့ full backup လုပ်ပေးမယ့် holo backup
တစ်ချို့ root မဖောက်ခင်တို့...bootloader unlock မလုပ်ခင်တို့ကြိုလုပ်ထားမမှားဘူးပေါ့ဗျာ
ရေးသားသူ- ဘီလူး ဂဒုံး at Monday, January 20, 2014 No comments: Links to this post
G730-C00 ရဲ့ firmware link လေးပါခင်ဗျာ... အဆင်ပြေကြပါစေ........
android game တော်တော်များများကို ပိုက်ပိုက် hack မယ် (Rooted devices only)
အာ့ထဲမှာ rootexplorer , terminal emulator နဲ့ sm ဆိုတဲ့ ဖိုင် ၃ခုပါပါတယ်ခင်ဗျာ..
ဒေါင်းပီးပီဆိုရင် တော့ zip ကို ဖြည်ချလိုက်ပါ
အထဲက sm ဖိုင်ကို root explorer ကိုဖွင့် system/xbin ထဲကို ထည့်လိုက်ပါ..
ကူးပီးပီဆိုရင်တော့ sm ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးကိုဖိ ပီးရင် permission ကို ရှိသမျှအကုန်အမှတ်ခြစ်ပစ်လိုက်
ကျနော် railrush နဲ့စမ်းပြမယ်..
ဂိမ်းကိုဖွင့်လိုက်ပါ.... ကိုဆော့ထားတဲ့ ပိုက်ပိုက် ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာတစ်ချက်မှတ်ထားပီး home ကိုနှိပ်ပီးထွက်လိုက်ပါ...
ပီးရင် terminal emulator လေးကိုဖွင့်ပီးတော့အောက်ကအတိုင်းရိုက်ပါ
su (ကွကို superuser permission ပေးလိုက်တာပါ)
ps (running prossess တွေကိုကြည့်တာပါ)
sm (စောနက system/xbin ထဲကူးထည့်ထားတဲ့ sm လေးကိုဖွင့်လိုက်တာပါ)
စောနက ps နှိပ်ပီးတော့ အောက်မှာ run နေတဲ့ app list တွေကြထားတာတွေပါလိမ့်မယ် အာ့ထဲက name ရဲ့အောက်မှာ
railrush ဆိုတဲ့နံမယ်ပါတဲ့စာကြောင်းကိုရှာလိုက်ပါ... PID ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်က နံပါတ်လေးကို မှတ်ထားလိုက်ပါ-
ရေးသားသူ- ဘီလူး ဂဒုံး at Sunday, January 19, 2014 No comments: Links to this post
Lenovo A850 CWM Recovery(English)+ Flash Tool
Lenovo A850 ရဲ့ English CWM လေးပါ။
ထည့်သွင်းပုံ ကို အောက်မှာ ပုံနဲ့တကွ ပြထားပေးပါတယ်။
အရင်ဆုံး လိုအပ်တာလေးတွေ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Saturday, January 18, 2014 No comments: Links to this post
Huawei G610-U00 CWM Recovery (English)+Flash Tool
ဒါကတော့ Huawei G610-U00 အတွက် CWM Recovery လေးပါ။
English version ဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်တဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းပါ။
လုပ်ပုံလုပ်နည်းက G730-U00 CWM နဲ့ အတူတူပါပဲခင်ဗျာ။
Huawei G730-U00 CWM Recovery (English) +SP Flash Tool
Huawei G730-U00 CWM Recovery လေးပါ ။ English Version လေးဖြစ်ပါတယ်။
လိုအပ်မယ်ထင်တဲ့ သူငယ်ချင်း အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းပါ။
CWM ထည့်သွင်းပုံကို ပုံနဲ့တကွ ပြထားပါတယ်။
အရင်ဆုံး လိုအပ်သည်များ ဒေါင်းပါ၊
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Friday, January 17, 2014 No comments: Links to this post
Easy GIF Animator 6.1 Pro PreActivated
လှုပ်ရှားနေတဲ့ GIF ပုံလေးတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်ချင်တဲ့ သူများအတွက်ပါ။
သုံးရတာအဆင်ပြေပြီး ဆော့ဝဲဆိုဒ်ကလည်း သိပ်မများပါဘူး။
Easy GIF Animator is powerful yet very easy to use software for creating and editing animated GIF images. With this animated GIF editor you can easily create animated pictures, banners and buttons in no time. You can use special features to add stunning visual effects and prepare your animation for publishing on your web page. Easy GIF Animator supports all types of GIF animation and provides high compression and great quality for your animated GIF images. To top it all off, Easy GIF Animator is the best priced animated GIF editor on the market today. The latest version of our GIF animator includesabuilt-in image editor, banner wizard and special tools to make your experience even more productive. The new Easy GIF Animator is designed to make the creation of animated pictures more productive and give you better results than ever.
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Friday, January 10, 2014 No comments: Links to this post
Zawgyi-One Flipfont version 3.4
Developer ကို မျိုးမင်းလတ်ရဲ့ January, 4, 2014 မှာ ထွက်ရှိတဲ့ Zawgyi-One Flipfont version 3.4 ပါ။ samsung galaxy ဖုန်းတွေမှာ root လုပ်စရာမလိုပဲ မြန်မာစာဖောင့် ပြောင်းတဲ့ ဒီ apk လေးကို တော်တော်များများ သိကြပြီးသားပါ။
ဒီversion လေးမှာတော့ font အလှ ၂၅ မျိုးပါဝင်လာပါတယ်။
ကိုမျိုးမင်းလတ်ကတော့ Google Play မှာ ဒီလိုပြောထားပါတယ်။
--Android 2.3x အသုံးပြုသူများတွင်(Love, Ubuntu,Iphone, SoMA,Chococooky) font5 မျိုးမှာ မြန်မာစာမပေါ်သောကြောင့်update ပြန်လည် ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ယခု version တွင် ပြန်လည်အဆင်ပြေသွားပါပြီ။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Thursday, January 09, 2014 No comments: Links to this post
Myanmar Font Installer V1.0 Android 4.3 Only apk
ဒီ apk လေးက Jelly Bean 4.3 အတွက် မြန်မာစာ အမှန်ပေါ်စေမယ့် apk လေးပါ။
ကို Djjoe Man ဆီက ရထားတာပါ။
လိုအပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ ပြန်ရှာတဲ့ အချိန် ခက်ခဲနေမှာစိုးလို့ ကျွန်တော် ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Huawei G730-U00 & C00 Myanmar Font
Huawei G730-U00 & C00 အတွက် မြန်မာစာဖောင့်ပါ။
လောလောဆယ် Frozen Keyboard နဲ့ အဆင်မပြေသေးပါဘူး။
Bagan Keyboard နဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။
Font Installer က apk နဲ့ တစ်ခု ၊ Bat File နဲ့ တစ်ခုပါ။
ကိုယ်ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ကို သုံးကြပါ။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Tuesday, January 07, 2014 No comments: Links to this post
Huawei G610-C00 အတွက် Firmware လေးခုပါ။ Build Number4မျိုးအတွက် ရှာထားပေးတာပါ။
လိုအပ်တဲ့သူငယ်ချင်းများ ဒေါင်းကြပါ။ B124, B125 , B126, B127 တွေ အတွက်ပါ။
APK for My Website www.myanaungtharr.com
ကျွန်တော့် website အတွက် APK လေးပါ။
လိုအပ်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းပါခင်ဗျာ။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Sunday, January 05, 2014 No comments: Links to this post
Windows 8.1 အတွက် အဆင်ပြေတဲ့ KMS Activator လေးပါ။
Windows 8.1 အပြင် အောက်မှာ ပြထားတဲ့ edition တွေပါ support လုပ်ပါတယ်။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Saturday, January 04, 2014 No comments: Links to this post
Defraggler PRO 2.16.809 with Activator(32bit+64bit)
Use Defraggler to defrag your entire hard drive, or individual files - unique in the industry.This compact and portable Windows application supports NTFS and FAT32 file systems.
မိမိ Hard Disk ကို သွက်လက်ပေါ့ပါးစေမယ့် Defraggler လေးပါ။
သူ့ရဲ့ မူရင်း ဆိုဒ်က http://www.piriform.com/defraggler ပါ။
ဒီဆော့ဝဲလေးက $24.95 တန်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Activator လေးနဲ့အဆင်ပြေအောင် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ရေးသားသူ- Phyo Gyi at Friday, January 03, 2014 No comments: Links to this post
အစွမ်းထက် အသုံးဝင် MobileUncle v2.9.8.apk(for android)
အစွမ်းထက် ပြီး အသုံးဝင်တဲ့ android အတွက် apk tool လေးပါ။
အောက်က feature လေးတွေ ပါတယ်ဗျ။
China Tablet တွေ recovery မပါလို့စိတ်ညစ်နေလား ????...
4.0 နဲ့ အထက်တွေကို root မလိုပဲနဲ့ full backup လုပ်...
android game တော်တော်များများကို ပိုက်ပိုက် hack မ...
Defraggler PRO 2.16.809 with Activator(32bit+64bit...
အစွမ်းထက် အသုံးဝင် MobileUncle v2.9.8.apk(for andr...